Yan Aung: အလှုငွေ စာရင်းရှင်းတမ်း (၁)
ဆရာတော်အတွက်သာမက သင်တန်းဆရာများ၊ သင်တန်းကျောင်းများ၊ သင်တန်းသားများရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ကျွန်တော် ဆွေးနွေး တင်ပြလိုပါတယ်. ဒ့ါအပြင် ကျွန်တော်တို့ မကြာခင်မှာ တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းမယ့် ဆွမ်းလောင်းအသင်းကိစ္စ၊ မေတ္တာရှင် ဖောင်ဒေးရှင်းကိစ္စနဲ့ စာသင်သား သံဃာတော်များကို ဆေးဝါးနဲ့ဗလာစာအုပ်များ လှူဒါန်းပူဇော်မယ့် အကြောင်းနဲ့ ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်း ဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်.
ပထမဦှးဆုံး ဆွမ်းလောင်းအသင်းမတည်ထောင်မီထိ လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ အလှူငွေစာရင်းရှင်းတမ်းကို ဆရာတော် ဦးကောဝိဒမှ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်နေ့က Email နဲ့ တဆင့်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်. စာရင်းတင်ပြရတာ လွယ်ကူအောင် အလှူရှင်နာမည် စာရင်း အသေးစိတ်ကို ချန်လှန်ထားခဲ့ပါတယ်. မကြာခင် ပြုလုပ်မယ့် မေတ္တာရှင် ဖောင်ဒေးရှင်း ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာ အတိအကျ ထုတ်ပြန်ကြေငြာပေးသွားပါမယ်.
ဒီမှာ ဒေါင်းလုပ်လို့ ရပါတယ်.
ဒီစာရင်းထဲမှာ ပါတဲ့ ကျွန်တော့်ဖက်က လက်ခံရရှိတဲ့ အလှူရှင်စာရင်း ဖြစ်ပါတယ်.
စုစုပေါင်း - အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၅၀ (မြန်မာငွေ ... နှစ်သိန်း ခုနစ်သောင်း ကျပ်တိတိ်)
ဒီနေရာနဲ့ ဒီနေရာမှာတော့ အလှူရှင်စာရင်း အသေးစ်ိတ်နဲ့ ငွေလွှဲရာမှာ လက်ခံရရှိတဲ့ လက်မှတ်ထိုးပြီးသား ပြေစာများကို စကင်(န်)ဖတ်ပြီး တင်ပေးထားပါတယ်.
ဆွမ်းအလှူအတွက် ငွေစာရင်းအသစ်ကို ကျွန်တော် ပို့စ်တစ်ခုအနေနဲ့ နောက်တစ်နေ့ ထပ်တင်ပေးသွားပါမယ်. အဲဒီ့စာရင်းထဲမှာ ဒီအလှူရှင်တွေ ပါပါတယ်ခင်ဗျာ.
အထက်ပါ အလှူငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၈၀ ကို မနေ့က ဇူလိုင် ၁၇ ရက်နေ့ ပေါက်ဈေး ၁၁၃၀ ကျပ်နဲ့ မန္တလေးဈေးချို ရိုးမဘဏ်ကို လွှဲပြောင်းပေးပြီး ဖြစ်ပါတယ်. ဒါကတော့ ဦးကောဝိဒမှ ပေးပို့လာတဲ့ လက်ခံရရှိကြောင်းပြေစာပါ. မြန်မာငွေအားဖြင့် ၃၁၆၄၀၀ (သုံးသိန်းတစ်သောင်း ခြောက်ထောင်လေးရာ ကျပ်တိတိ)ကို လွှဲပြောင်းပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်.
နောက်တစ်သုတ်လွှဲဖို့အတွက် အလှူရှင် တစ်ယောက်ရှိပါတယ်. ဇူလိုင်လမကုန်ခင်မှာ နောက်တစ်ခေါက် ထပ်မံလွှဲပေးသွားပါဦးမယ်.
၁.ဦးကြံအောင် (ယူအက်စ်အေ)မှ တစ်နှစ်စာဆွမ်းအလှူငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀(US$60.00) (On Hold)
တစ်နှစ်စာ ဆွမ်းအလှူရှင်များ စာရင်း အသေးစိတ်နဲ့ အလှူပြုလုပ်မည့်ပုံစံကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.
အလှူအတွက် စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဘလော့ဂါကြီးရန်အောင် လိုရာဆန္ဒ